Homegrowers၊ Microgrowers ဆိုတာဘယ်သူလဲ။ | Pennsylvania ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးသူလျှောက်လွှာ
Pennsylvania ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးသူများအတွက်လျှောက်လွှာများ ဆေးခြောက်အတွက်ခဏတာမရရှိနိုင်ပေမယ့်ဖြစ်ပျက်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုသင်ဖတ်နိုင်သည် SB 350။ တစ်နေ့သောအခါပင်စီဗေးနီးယားစိုက်ပျိုးသူများလိုင်စင်ဖြစ်လာနိုင်သောဥပဒေ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသည်။
ဆေးခြောက်ဝန်းကျင်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနှင့်အတူ ဆေးခြောက်ဥပဒေများ နောက်ဆုံး၌ပclိပက္ခဖြစ်နေသောအမြင်များကိုလက်ခံရန်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ အပန်းဖြေဆေးခြောက်အသုံးပြုမှုကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုရန်အတွက်ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုအားမိတ်ဆက်ပေးသည့် Pennsylvania ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ်နှစ် ဦး ၏သတင်းသည်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ အပန်းဖြေဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်သည့်ဆီးနိတ်ဥပဒေကြမ်း ၃၅၀ ကိုပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ်များရှရစ်ဖလမ်းနှင့်ဟယ်ရစ်စဘတ်ရှိ Daylin Leach ကအင်္ဂါနေ့ကမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Leach ကအတည်ပြုပြီးပါကဘီလ်သည်နောက်ဆုံး၌ဆေးခြောက်မှောင်ခိုဈေးကွက်ကိုစစ်ဆေးပြီးပြည်နယ်အတွင်းရှိဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုကိုစည်းမျဉ်းများဖြစ်စေလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်။ အထက်လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်း ၃၅၀ တွင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက်ဆေးခြောက်ကြီးထွားရန်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံသူများအတွက်အခြေခံအတွေးအခေါ်များနှင့်စည်းမျဉ်းများပါ ၀ င်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်သက်ဆိုင်သောအခြေခံသဘောတရားများကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးထားသည် Pennsylvania စိုက်ပျိုးသူ လြှောကျလှာ နှင့်ဥပဒေကြမ်းအပေါ်ချမှတ်ရန်ရှာကြံစည်းမျဉ်းများ စိုက်ပျိုးသူများ။
ဆီးနိတ်ဥပဒေကြမ်း ၃၅၀ ကိုနားလည်နိုင်ရန်အဆိုပြုထားသောလျှော်ပင်ထုတ်လုပ်သူအမျိုးအစားသုံးမျိုး၏နောက်ကွယ်ရှိစိတ်ကူးကိုနားလည်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ နေအိမ်, မိုက်ခရို, နှင့် စိုက်ပျိုးသူများ။
အဆိုအရ အထက်လွှတ်တော်ဘီလ် 350, ဟူသောဝေါဟာရကို နေအိမ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုရန်ဆေးခြောက်စိုက်ပျိုးရန်ဌာနမှခွင့်ပြုသောလူများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဝေါဟာရ မိုက်ခရို ဆေးရုံဆေးခန်းကိုဆေးခန်းသို့တင်သွင်းသူသို့မဟုတ်ပရိုဆက်ဆာသို့ရောင်းချရန်ဌာနမှခွင့်ပြုထားသူများကိုရည်ညွှန်းသည်။ တတိယအမျိုးအစား, ကိုခေါ် စိုက်ပျိုးသူများ၊ တစ် ဦး ချင်း၊ အသင်းအဖွဲ့များ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်မိတ်ဖက်များပါ ၀ င်သည်။ ဆေးခြောက်သီးနှံအရွယ်အစားမှာပြင်ပနေရာစတုရန်းပေ ၁၅၀,၀၀၀ (သို့) မိုးလုံလေလုံစတုရန်းပေ ၆၀,၀၀၀ ကျော်လွန်သည်။
အဆိုပြုထားသောဥပဒေကြမ်းသည်စည်းမျဉ်းများအရတင်းကြပ်ဆုံးဖြစ်သည် စိုက်ပျိုးသူများ၊ နှင့်ဤဆောင်းပါး၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်အမျိုးအစားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ် စိုက်ပျိုးသူများ။
စိုက်ပျိုးသူများ၊ Microgrowers နှင့် Homegrowers တို့၏အယူအဆများကိုနားလည်ခြင်း
အဆိုပြုထားသောဥပဒေကြမ်းသည်သဘောတရားများကိုရှင်းလင်းစွာခွဲခြားထားသည် စိုက်ပျိုးသူများ, မိုက်ခရိုနှင့် နေအိမ်.
အဆိုပြုထားသည့်ဥပဒေကြမ်းအရစုစုပေါင်းသီးနှံပမာဏသည်ပြင်ပspaceရိယာ၏စတုရန်းပေ ၁,၅၀၀၀၀ (သို့) မိုးလုံလေလုံsquareရိယာ၏စတုရန်းပေ ၆၀,၀၀၀ ထက်ကျော်လွန်သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် G အမျိုးအစားအောက်တွင်ကျရောက်မည်ဖြစ်သည်။လှေသမား။ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဆေးခြောက်ကိုစိုက်ပျိုးရန်သို့မဟုတ်ဆေးခန်းသို့ရောင်းချရန်ခွင့်ပြုထားသောသူများသည်အမျိုးအစားအောက်တွင်ကျရောက်လိမ့်မည်။ 'Microgrowers။ '' နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဥပဒေကြမ်းဖော်ပြသည် 'အိမ်သူအိမ်သားများ' ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုမှုအတွက်ဆေးခြောက်ကြီးထွားဖို့ဌာနကခွင့်ပြုမဆိုလူတစ် ဦး အဖြစ်။
ဤအမျိုးအစားသုံးမျိုး၏ကွာခြားချက်ကိုနားလည်ရန်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောတရား ၀ င်ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အမျိုးအစားအားလုံးအပေါ်တွင်ကန့်သတ်ချက်များကွဲပြားသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအဓိကထားဖော်ပြထားသည် Pennsylvania Homegrower လျှောက်လွှာအသစ်သောဥပဒေကြမ်းမှအဆိုပြုထားသည့်အတိုင်းအဆိုပြုထားသောဥပဒေကြမ်းအပေါ်ကန့်သတ်ချက်များ နေအိမ်.
နယူးမက္ကစီကို၏ဆေးခြောက်လက်လီလိုင်စင်နယူးမက္ကစီကိုပြည်နယ်သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသုံးဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်လုပ်သည်။ ဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူသုံးသောဆေးခြောက်လိုင်စင်ကိုနိုင်ငံတော်သို့စတင်ခဲ့သည်။ သင်ဥပဒေကြမ်းဘက်ပေါင်းစုံနှင့်ပတ်သက်။ အဘယ်သို့မိန့်ထွက်စစ်ဆေးချင်လျှင် ...
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးခြောက်စီးပွါးရေးရှေ့နေများသည် 3097404033ss ပိုင်ရှင်များလည်း businetel ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်သင်၏စီးပွားရေးကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ (သို့) ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးသောစည်းမျဉ်းများမှကာကွယ်ရန်ကူညီနိုင်သည်